တန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းဖုန်းမျှော်လင့်ချက်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » တန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းဖုန်းမျှော်လင့်ချက်….
Posted by kanjosan on Jan 26, 2012 in Myanma News, News | 13 comments
ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီ မှ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း စီမံကိန်းကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ တရားဝင် ပူးပေါင်းမယ်လို့သတင်းရပါတယ်… “ဒီ ​နေ့​ပဲ ကျ​နော် ဆက်သွယ်​ရေး​ကို တင်လိုက်တယ်။ အခုထိ ဘာမှ မသိရ​သေး​ဘူး​။ တင်တယ်ဆိုတာ ကျ​နော်တို့​ ဒီလုပ်ငန်း​အတွက် ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်ဖို့​ ကိစ္စ​တွေ၊​ စီး​ပွား​ရေး​ အစီအစဉ်​တွေ​ပေါ့​။ နည်း​ပညာပိုင်း​ ဆိုင်ရာ​တွေပါ နှစ်ခုလုံး​ပါတယ်။ ပြည်သူ​တွေ စရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့​ တယ်လီဖုန်း​တွေ ကိုင်နိုင်​အောင် ကျ​နော် ကြိုး​စား​နေပါတယ်။ ဆက်သွယ်​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနလည်း​ ပူး​ပေါင်း​ ​ဆောင်ရွက်ပြီး​ ဘယ်လိုလုပ်လို့​ ရနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့​ နည်း​လမ်း​တွေ​ပေါ့​။ ကျ​နော်တို့​က ဥပ​ဒေအရ၊​ မူ​ဘောင်အရ သွား​နေတာပါ။”
ယခုလည်း မြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ နော်ဝေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် Telenor Group အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Sigve Brekke ပါဝင်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍမှာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဆွေးနွေးတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်…..
တော်ပါပြီဗျာ ၅၀၀၀တန် ဖုန်းလည်းမလိုချင်တော့ပါဘူး
အခုတစ်လော ဖုန်းတစ်ခါ ခေါ်ရင် အခါ ၆၀လောက်ခေါ်နေရတယ်
၉၁၀ ဆို အားတိုင်း ဆာဗာဒိုင်းနေတာကြည့်ဘဲ
ဈေးပေါတဲ့ ဖုန်းထက် ဆက်သွယ်ရေးက စက်ကိုသာက အဆင့်မြင့်ရင် ပိုကြိုက်တယ်
နောက်ပိုင်းနည်းပညာမြင့်လာရင် video ချက်တွေလုပ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်
ဆိုတော့…၅၀၀၀ တန်ဖုန်းရနိုင်တယ်ပေါ့။ ကြိုးစားထား….
ဘယ်တော့လဲ… ဘယ်ချိန်လဲ??? ယုံဘူး….
ခွင့်ပြုမိန့်ရရင် ၃လ ကနေ ၆လ အတွင်း အကောင်အထည်ပေါ်မှာမှာ… မှတ်ချက်၊ (တာဝတိံသာနတ်သက်)
Why Telecommunications Ministry don’t allow to Shwepyitakon Company or other more cheaper companies.? When I was Japan, it is very cheap and sometimes, can get free or zero yen. Shanghai Bell, ZTE , Htoo and IGE
( Nay Aung, Son of U Aung Thaung ) are very very rich . Why still they want to profit Myanmar poor people?
ဖုန်းများပြီး လိုင်းမ၇၇င်ဖုံးဆိုတာ သီးချင်းပဲနားထောင်လို့၇တယ်။
‎(29.1.2012) ရက်နေ့တွင် (၅၀၀၀) ကျပ်တန် SIM Card အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ရွှေပြည်တံခွန်မှ ဦးလွင်နိုင်ဦး (MD) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ဦးဣိဒ္ဓိလှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ မီဒီယာများရှေ့မှောက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားကို ပုဇွန်တောင်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းတွင် မနက် (၉) နာရီခွဲမှ (၁၀) နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးက္ကုဒ္ဓိလှ (ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေမှူး) မှ (၅၀၀၀) ကျပ်တန် SIM Card နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိ အစီအစဉ်အရ မဖြစ်နိုင်ပါသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယနေ့တွင် (၅၀၀၀) ကျပ်တန် SIM Card အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ရွှေပြည်တံခွန်မှ ဦးလွင်နိုင်ဦး (MD) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ဦးဣိဒ္ဓိလှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ မီဒီယာများရှေ့မှောက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားကို ပုဇွန်တောင်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းတွင် မနက် (၉) နာရီခွဲမှ (၁၀) နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးက္ကုဒ္ဓိလှ (ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေမှူး) မှ (၅၀၀၀) ကျပ်တန် SIM Card နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိ အစီအစဉ်အရ မဖြစ်နိုင်ပါသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆုံးကြတော့ ဥပဒေမရှိလို့ပါ… အရင်းအနှီးအမြတ်မကျန်လို့ပါ… ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အဆိုပြုလွှာများမှာ ပြည်တွင်းထက် ပိုမိုများပြားတယ်တဲ့.. ဒါဆိုရင် ကိုယ်ရင်းနှီးစရာမလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလား… ဂွင်ပျောက်သွားမှာဆိုးလို့လား… ပြည်သူတွေဈေးကြီးပြီး မတန်တဆပေးဆောင်ပြီး သုံးရမှ ကျေနပ်နေတာလား မေးခြင်ပါတယ်….
Permit is the most expensive in the world because ofalot of bribe at every level . It must kick away.
Let us wake up to demand our right.
ဆက်သွယ်ရေးကလူကြီးတွေနဲ့ နည်းပညာတွေမဆွေးနွေးနဲ့ …….ပလာတာကျွေးရသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့